Coinbase wuxuu soo saaray Qiime xaqiijiye si loo ilaa liyo Sugnaanta Dhaqaale $ 1 Bilyan ee DeFi dhaqalaha aan lakala lahayn – Kiribto Somali Media
Isweydaarsiga sarrifka lacagaha ‘kiribto ayaa ah mid marwalba qiimaha lakal siisto xogtiisa adagtahay in sicad loo wada helo qiimaha dhabta ah ee suuqa balse shirkada suuqa sarifka ee Coinbase ayaa waxay sheegtay in ay dhistay coinbase oracle oo sicirka suuqa u saamaxaya qof kasta inuu ku daabaco xogta sicirka Coinbase Oracle, oo ah qiime xaqiijisan, wuxuuna siinaya isticmaalayaasha fursad bilaash ah oo ay ku helaan xogta suuqyada BTC-USD iyo ETH-USD, coinbase waxay shaacisay Khamiistii. Fikraddan ayaa ah in loo helo suuqan xorta ah een cidina kala la haynd qiimaha saxda ah ee kiribto
Qiimaha suuqa ayaa laga keenayaa Coinbase Pro waana la cusboonaysiiyaa daqiiqad kasta, shirkadda ayaa sharraxday. Hadal keedana ku sheegtay in qiimaha uu yahay mid waqti dhab ah ayna bixiyaan shirkado kale oo ka shaqeeya dhaqalaha xortah ee aan lakala lahayn looyan (DeFi). Ee sida weyn loo adeegsado sida Uniswap iyo Kyber. Shabakadahan awoodda baahsan waxay adeegsadaan oracle si ay u bixiyaan adeegyadan suuqayada kala duwan ee kiribto lagu kala sarifto
Si kastaba ha noqotee, qiimo soo baahiyayaasha dhaqalahan aan lakala lahayn ayaa $ 1 bilyan oo dhaqaalaha DeFiga,ah ayaa lagu dhalleeceeyay nabadgelyo-xumada iyo ku guul-darraysiga bixinta qiimaha saxda ah. Waxa jira tusaaleyaal weeraro ah. Deyn-bixiyeyasha kiribto ee looyan Bzx waxay lumiyeen in ka badan $ 645,000 oo qiimahoodu yahay ETH weerar afka ah bishii Febraayo – xadgudubka noocan ahi wuxuu keenay in bulshadadu dhaleeceyso dhaqamadan oo kale.
Coinbase oracle ayaa sheegtay in arimahan ookale aysan markale soo noqon doonin oo farsamo casri ah ay isticmalayaan
Qof kasta ayaa daabici kara qiimaha gudaha-silsiladda maadaama xogta ay horay u saxeexday furaha gaarka ah ee Coinbase, looma baahna in lagu aamino baahinta. Adigoo adeegsanaya furaha qiimaha coinbase’ oracle dadweynaha, iyo qof kasta ayaa xaqiijin kara saxnaanta xogta.
Coinbase wuxuu iftiimiyay halista la xiriirta helitaanka xogta meelaha laga helo ee silsilada. Isticmaalka xogta silsiladda waxay u baahan tahay aaminaadda baahiyaha inuu soo dhejiyo qiimaha saxda ah oo uu keydka saxiixa ka dhigo mid badbaado leh, ayey dhaheen, iyadoo raacineysa “aakhirkii taariikhda tani waxay caddeysay inay tahay dhibaato adag, gaar ahaan marka ay hanti culus loo isticmaalo xogtaas
Marka la is barbardhigo, Coinbase Oracle waxay sheeganeysaa inay martigelineyso farsamayn shaandheyn diideysa iyo wax kabadalka xogta, taasoo si weyn u adkeyneysa awoodda la filayo iyo dhowrida hanti kasta iyadoo la ilaalinayo isweydaarsiga sicirka sarrifka ama xogta aan ansax ahayn.